China Industry News Factory - Cheap Industry News Supplier, ekspootu
Post oge: 04-20-2018
Nke a Koowheel Electric onwe guzozie skuuta e1 bụ ìhè ma energetic, patent Innovative fashionable jụụ imewe, Ikanam ngosi ihuenyo kpamkpam egosi batrị na-agba, super ujo absorption na 8inch roba pneumatic taya. E wezụga, apịaji na-ebu mfe. Otú ọ dị, ọ pụrụ inye identi ...GỤKWUO »
Mere Ị Chọrọ A abụọ wheel Self adịzi Electric skuuta
Post oge: 03-21-2018
E nwere ụfọdụ ejiji na nwere nsogbu batrị usoro na n'ime osisi na-chụọ n'ọrụ. The osisi a na-haziri maka na anabata nje sensọ na-eso gị n'ebe ọ bụla ị na-ịgbanwee gị ibu na. Mgbe abanye a Swagtron, 1st nzọụkwụ ụkwụ na a oge si n'azụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ịdabere ba ...GỤKWUO »
Electric Skateboards ike Mee agba Iberibe
Post oge: 03-15-2018
Mgbe isi ụdị pụtara dị na ahịa, ha e nanị kwesŽrŽ-eji dị ka nwa afọ iga, ịbụ ukwuu n'ihi na mgbe ị chọrọ ịga a enyi ụlọ, ka ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ n'ụzọ. Nke a ngwa ngwa electric skateboard abịa na a n'azụ diski breeki, oke pneumati ...GỤKWUO »
Post oge: 03-09-2018
Gịnị ajụjụ a ga-atụle? N'ezie ya Safety. N'ihi ya, anyị Koowheel electric skateboards soplaya ọbọ OA, RoHS, FCC UN38.3 asambodo. Dị nnọọ ka a ụgbọ ala ma ọ bụ bike, ndị a electric skateboards Ọzọkwa kwesịrị omume ọma-nọgidere na-enwe na ebumnuche na-agba ọsọ mụrụmụrụ. Ọ bụrụ na ọ ma eleghị anya ...GỤKWUO »
Post oge: 03-07-2018
Banyere mmepụta nke skateboard, ị nwere ike iji na-atụgharị uche ụfọdụ ndị mejupụtara ya mmepe. Ọ bụrụ na ị na-amasị echiche nke ihe electric skateboard, ma ị hụrụ n'anya gị ugbu ntọlite, ị chọrọ iji lee anya na eon: isi modular electric Powertrain. Na a ngwa ngwa paced ụwa dị ka nke anyị, ...GỤKWUO »
Ịzụ Good Quality na Cool Electric Skateboard
Post oge: 03-02-2018
Batrị n'ụzọ zuru ezu ebubo na ihe 2-3 awa, ịdabere na ole ọ na-drained. Ị nwere ike mechie ma ọ bụ na-emeghe gị aka dị ukwuu dị ka ị chọrọ, na-enweghị na-echegbu onwe ya na-ada ma ọ bụ na-efe efe laa. Kama nke ahụ, ọ dịghị otu n'ime ọtụtụ "elu-edu" na mkpụrụ ndụ nwere ikike nke di nso gosiri capacit ...GỤKWUO »
Olee ebe ị chọrọ ịga njem na a mmiri?
Post oge: 02-28-2018
Spring na-abịa n'oge na-adịghị, ga-amasị gị na-aga na a njem n'oge ọ bụla? Ma ọ bụ chọrọ ịga na ịchọpụta ụwa dị iche iche? Ị chọrọ na-enye onwe gị ma ọ bụ ezinụlọ otu nnukwu okè ezumike? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, biko họrọ a anwụ na-acha ụbọchị ịga, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwetaghị na-atụghị anya mma na njedebe ...GỤKWUO »
Fọdụrụ n'ezinụlọ Journey Site Electric Skateboard
Post oge: 02-23-2018
Ọ na-aga ebe ọ na-ewe ụfọdụ akwa ọhụrụ guzo n'ime electric skateboard ebe; nhọrọ dị ka regenerative braking na na-wheel Motors. The wireless anya akara nwere ike chere na nke a bit nke a na-adịghị ike larịị dị ka ọ mere nke-agha plastic na ọ na-ele pụtara che ...GỤKWUO »
A ọhụrụ oge nke n'ụzọ-Electric Skateboards
Post oge: 02-06-2018
Na-emekarị, ruru ka size na arọ nke skateboards ebu ha bụ a okwu. Anyị Germany dabeere ukwuu n'ime mkpara ama ogologo ọchịchọ ịmata banyere "electro-agagharị", nke a nnukwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nchegbu na Germany na n'ezie na obodo nile niile site Europe. Anyị na-enye praịm-notch asịwo enyere a ...GỤKWUO »
The Lightest Electric Skateboard On ụwa
Post oge: 01-25-2018
Anyị na-uche-banyere otu n'ime ụzọ kasị mma isi na-na ọdabara erughị ala na yinye drive. Ọ bụghị ihe niile hoverboard ma naanị ndị a Electric hoverboards nke nwere kwesịrị ekwesị certifications nọ ná nchebe iji - a na-agụnye ihe niile kasị elu 10 kacha mma hoverboards depụtara n'okpuru. Ha na-sina ịbụ de ...GỤKWUO »
Ị ga mara tupu ịzụ a Hoverboard
Post oge: 01-19-2018
Na elu-tech onwe adịzi Usoro, abụọ steadiness na wuru-na gyroscope na mpo ihe mmetụta, nnọọ mfe mezie, dị nnọọ agbanwe gị physique ibu obi, gị skuuta ga flexibly nyefee n'ihu, backward, ekpe, aka nri, na ọbụna atụgharị 360 ubre a ntụpọ. Onye nke kasị mma fe ...GỤKWUO »
Unique Dị Iche Iche Self adịzi Scooters
Post oge: 01-12-2018
The mannequin nwere na-kpebisiri ike dị kwa na àgwà nke moto. Ee, ọ na-aga ego ị a otutu ego, Otú ọ dị na-ewere a lee anya na-ewu, na n'oké àgwà nke na-ewu nke a dị ize ndụ nwata, ị na-ekpe na-eche ma ma ọ bụ na ọ bụ a transformer nọ n'ebe zoro ezo. Easily rech ...GỤKWUO »
Ihe Kasị-atọ Ụtọ Hoverboard adịzi Scooters 2018
Post oge: 01-04-2018
Yana, na electric skuuta abịa dị iche iche na agba na ọ bụ na-ekwe omume ka icho mma na ihennyapade nke bara uru cowl na scratches na Pop bu mmiri ogwu ọ bụla mere mgbe. N'ezie, ọ bụ a ụdị nke ahụ nwere ike na adị gị a n'ebe ọ bụla na-aga na ị na-aiming na n'ime no ...GỤKWUO »
The Electric Skateboard ga-Cool Christmas Onyinye na 2018?
Post oge: 12-22-2017
Christmas na-abịa n'oge na-adịghị. Gịnị bụ gị chọrọ na afọ ọhụrụ? Ị na-achọ a jụụ na fashionable onyinye maka ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ? Ma eleghị anya, ị na-na na scoured ụfọdụ n'ime n'elu toy chọrọ-anatara na ihe niile na-gburugburu oké onyinye echiche, mgbe ahụ ka na-enweghị ike ịchọpụta a ezigbo onyinye? Ọ bụrụ na ị na-achọ som ...GỤKWUO »
Types of braking na Electric Skateboards
Post oge: 12-14-2017
Na nke ọ bụla electric ụgbọala, e nwere ọtụtụ isi di iche iche nke braking- ike, esemokwu, na regenerative braking. Ha niile na-eji ụzọ dị iche iche nke ibelata ụgbọala ala. Esemokwu braking esemokwu brek bụ otu ụdị brek na-eji na ot ụgbọala. Nnoo, esemokwu agai ...GỤKWUO »
Post oge: 12-06-2017
Abụkarị ị na-achọghị na-ebu gị electric skateboard anya site n'aka, na a osisi azu paaki pụrụ ime ka ọ dị nnọọ mfe ime otú ahụ. Na a board azu paaki, ị nwekwara ike na-eche free na-ebu gị osisi na-arụ ọrụ n'oge a ezo ụtụtụ ma ka na-agba ịnyịnya ya azụ n'ụlọ mgbe ọ bụ sunnier na mgbede. Nke ...GỤKWUO »
Good Self adịzi skuuta With APP
Post oge: 11-30-2017
E nwere ọtụtụ unlicensed hoverboards si n'ebe dị na ahịa, na ị na-ahọrọ na-eme ka n'aka na ị ga-enwe otu nke bụ ala na-agba ịnyịnya n'ihi na ị ma ọ bụ gị na na. Ndị a hoverboards dị site kpamkpam dị iche iche sịrị na dị iche iche size na ụdị ka izute onye chọrọ. The ...GỤKWUO »
Electric skateboards nwere ike ịgbanwe gị n'ụzọ
Post oge: 11-03-2017
Dị ka ndụ ndị mmadụ ka ọkọlọtọ-aga n'ihu na-ebili, ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ na-ahọrọ na-achụ ihe fashionable na-adaba adaba ndụ. Karịsịa youngers, ha chọrọ inyocha ihe ọhụrụ na-akpali akpali ihe. Ya mere, ha nwere a elu ina mkpụmkpụ-anya njem ngwaọrụ. Na otu aka, ha pụrụ inwe conv ...GỤKWUO »
China Outdoors Sporting Electric Self adịzi Scooters
Post oge: 10-27-2017
Nke ahụ bụ n'ihi na ndị a onye agagharị Ngwa na-adịghị pụtara maka anya njem, Otú ọ dị na-pụtara iji mee mkpumkpu commutes mfe na extra oru oma. Inyere maka Bluetooth ụtọ ọrụ nke ọma ntị na dị iche iche stereo play nkeji. Yana atụmatụ ndị a, a Hover ...GỤKWUO »
Mere The E-skateboard Ya mere Sizzling ma nabata Site Ị.
Post oge: 10-19-2017
Nke ahụ bụ eziokwu, mgbe ha na-asị na ha na-na na pụrụ iche, e nwere otu ụdị nke a maara dị ka IOS na ahịa ugbua. Ndị a aka-free electric scooters ma ọ bụ electric skateboard nwere ike iwere na a nde ebe, ọ dịghị mkpa bụ ihe ị na-akpọ ha. Koowheel Kacha ọhụrụ version Electric ...GỤKWUO »
The zuru okè Cheap Off Road Electric Self adịzi skuuta
Post oge: 10-05-2017
The nso bụ otu n'ime ndị dị oké mkpa echiche ma na-ahọpụta ihe electrically kwadoro ụgbọala. Self guzozie skuuta maka ala-ọsọ ugbo ala, na niile tụnyere ahịa na ngwá ahịa yiri. Mepụtara Koowheel, na Hoverboard K7 na-patented dị ka a "na-wheel, onwe-guzozie onwe car.R ...GỤKWUO »
Post oge: 09-29-2017
Hi ~ N'ihi Koowheel 2nd ọgbọ electric skateboard Kooboard bụ nke mbụ electric skateboard ná ndụ m, na m na-adịkarịghị na-emefu ego ịzụta dị otú ahụ dị oké ọnụ toy (Na mgbakwunye, zụtara nzọ bike na "ezi ihe kpatara" ...) otú m ọkụ n'obi na-aga ka ogige. Na m bụ nnọọ painf ...GỤKWUO »
About N'onwe Electric Skateboard
Post oge: 09-22-2017
Yana electric skateboard na-ekpo ọkụ ma nabata site n'oge a na-eto eto, dị ka ogologo dị ka nwere ihe ndị magburu onwe Electric itule osisi, ha na-yikarịrị ka eme ụfọdụ N'onwe dị ka ha si chọọ. Nso nso m chọpụta ụfọdụ jụụ N'onwe skateboard na Instagram. Ijeụkwụ: A na-awụ ọsọ E-longboard ga-enyere ...GỤKWUO »
Post oge: 09-19-2017
Ihe kpatara nke na-akpọ a onwe adịzi skuuta dị ka "Hoverboard" bụ na ebe-agba, ya anya ka ị na-hovering a ọnụ ọgụgụ nke sentimita asatọ n'elu ala. Cheta na-ịnọgide na-enwe na kọntaktị na ala. Nke a bụ ihe magburu onwe abụọ-wheel onwe guzozie electric skuuta na bụ njikere inye a ụzọ ọzọ ...GỤKWUO »
Kasịnụ Holiday Njem Ngwá-Kooboard jụụ ndụ
Post oge: 09-05-2017
The "E-osisi" na oge dị na ahịa nanị iṅomi ngagharị nke na-ewu ewu, chepụtara echepụta mbadamba. Ugbu a, anyị pụrụ ịhụ na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-ọdịda na ịhụnanya nke a njem na ngwá ọrụ. Nso nso a, otu n'ime China n'elu ise hoverboard ika ụlọ ọrụ na-emepe emepe 2nd ọgbọ electric longboard ...GỤKWUO »
Post oge: 08-23-2017
The hoverboard na-nabatara ihe tọrọ ndị mmadụ, n'ihi na ha nwere ike nweela na-akparaghị ókè obi ụtọ na-enwe na-agba hoverboard, ma otú ịhọrọ a mma onwe guzozie skuuta? Ugbu a ka m nwere ike ikwu na atọ kasị dịrị nchebe na kasị mma onwe adịzi skuuta gị. Onye mbụ bụ KOOWHEEL ika Self Balanc ...GỤKWUO »
Nke a njem bụ ma environmentally na ọnụ
Post oge: 08-07-2017
Kwa Monday bịara, wa kwa jupụtara na bọs / ụgbọ oloko, na-egbu mgbu ndụ na ụzọ, m na-eche obi anyị na ike gwụrụ, elaborately na ntecha, akpatre e tinye na ọsụsọ na ìgwè mmadụ ahụ. Ọ bụ ezie na oge a na okporo ụzọ ngwaọrụ dị iche iche, ma na-izute mmadụ niile: ụgbọala na ụgbọala, kwa igbochi; Metro ụgbọ ala, ...GỤKWUO »
Dị iche n'etiti Koowheel k8 na mgbe 6.5inch hoverboard
Post oge: 07-26-2017
1. Price Koowheel 6.5inch smart balance wheel k8 is cheaper than regular 6.5inch hoverboard on the market. 2. Apearance Koowheel 6.5inch hoverboard k8 has the following features: private mode. Milan designer, which In line with European and American aesthetic habits. HANGHONG Motor (ensure t...GỤKWUO »
Na-na-onwe guzozie scooters nchebe iji?
Post oge: 07-07-2017
Self Inwe scooters, ma ọ bụ na-mara dị ka hoverboard, onwe adịzi osisi, electric itule skuuta ibu a na-ewu ewu ihe na-adịbeghị anya. Karịsịa na US na UK, ha na-amasị jupụtara ịma aka na obi ụtọ, na-achọpụta na-akpa ọchị ihe si kwa ụbọchị. Ndị a 2 wheel electric scooters enye ...GỤKWUO »
Ònye na-ekwu gị kwa ụbọchị na-aga aga nwere ike ịbụ fun?
Post oge: 07-03-2017
Ị na-achọsi on skateboarding kama ike gwụrụ nke niile ịkwa n'ukwu-unu? E nwere ihe a ọhụrụ electric skateboard si Koowheel China. Ma eleghị anya, nwere ike ịgbanwe otú ịkwaga. Ndị na-esonụ foto na-ewe site htfubeck. Daalụ maka na-ekere òkè ya. The Koowheel electric longboard skateboard e kere na SIM ...GỤKWUO »
The atọ Atụmatụ na-ahọpụta electric skateboard
Post oge: 06-27-2017
Ugbu a ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ nwere ejiji na technology arịrịọ mgbe laa njem, mgbe electric skuuta bụ mkpa ke mbiet otu njem. Ma n'ihi na ọtụtụ ọhụrụ ngwaahịa, ndị onwe guzozie skuuta price bụ ihe dị oké ọnụ, ya mere, anyị aghaghị ịkpachara anya mgbe anyị na-azụta. Anyị chịkọtara atọ ọcha nke purc ...GỤKWUO »
Olee ụdị ahụmahụ nwere ihe electric skateboard iwetara gị?
Post oge: 06-06-2017
The nwere ọgụgụ isi ndọtị ntụrụndụ ahụmahụ Electric Skateboards nwere anwugh ntụrụndụ àgwà. Ke mbubreyo 1950s, ndị bi n'ebe ndịda California beach obodo wuru ụwa mbụ skateboard. Dị ka ndọtị nke Farisii na ala, Electric Hoverboard kemgbe ime biya ...GỤKWUO »
Nke njem na ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị ka gị?
Post oge: 05-19-2017
Dị ugbu a, na obere anya ụgbọ njem, na youngers akwụ ihe anya itule skuuta, electric skuuta, electric skuuta na electric skateboard anọ ndị a na ụdị. Ha nkịtị atụmatụ, na mgbakwunye na-electric, ihe kacha mkpa bụ portability na ndị ọzọ ọhụrụ atụmatụ, dị ka w ...GỤKWUO »
Gịnị mere ndị E-skateboard otú na-ekpo ọkụ ma nabata site na-eto eto?
Post oge: 05-11-2017
Electric Skateboard jupụtara fun na ọ na-aghọ omume ntụrụndụ nke ọtụtụ na-eto dị iche iche. Na nso nso, karịsịa ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-amalite iso na nke a otu. Otú ọ dị, skateboard ndị ụmụ agbọghọ na-eji bụghị omenala otu, ma KOOWHEEL D3M sọrọ Motors Electric skateboard. Ndị dị otú ahụ a skateboard nwere mara mma appearan ...GỤKWUO »
Post oge: 04-17-2017
Ma electric scooters aghọwo a na-ewu ewu nhọrọ maka ntụrụndụ na mma. The na-eto eto na-agba ndị electric itule skuuta, pụrụ inwe nguzozi na mpiaji ike, na ike na-akwalite mmepe nke cerebellum na-akwalite ahụ ụbụrụ, welie cardiopulmonary mgbasa. ...GỤKWUO »
Electric itule skuuta - Gosi gị ejiji ndụ
Post oge: 04-05-2017
Okporo ụzọ jam bụ a nnukwu nsogbu na obodo, ya nnọọ ike ịchọ a na-adọba ụgbọala ohere, ya mere "mkpọchi" aghọwo ndị kasị adjective maka ndị bi n'obodo. Ya mere, na nke a na obodo ukwu, na-electric hoverboard ka njem mfe, karịsịa na okpomọkụ na oyi, ...GỤKWUO »